विश्वकपमा आज रोनाल्डोको पोर्चुगलविरुद्ध मोरोक्को मैदान उत्रिदै, रोनाल्डोलाई रोक्ला त मोरक्कोको डिफेन्सले ? || सुनौलो नेपाल
विश्वकपमा आज रोनाल्डोको पोर्चुगलविरुद्ध मोरोक्को मैदान उत्रिदै, रोनाल्डोलाई रोक्ला त मोरक्कोको डिफेन्सले ?
असार ६ काठमाडौँ, विश्व कपमा समूह चरणका खेलहरुको दोस्रो राउन्ड सुरु भएसँगै नकआउट चरणमा पुग्ने समिकरणहरु बन्न सुरु गरिसकेका छन् । आयोजक रुस अन्तिम खेलअघि नै प्रि क्वार्टरफाइनलमा पुगिसकेको छ भने इजिप्ट एक खेल बाँकी रहँदै बाहिरिने पहिलो टोली बनेको छ ।
बुधबार हुने खेल जितेको खण्डमा उरुग्वेले पनि अन्तिम १६ मा स्थान बनाउने छ । उरुग्वेले आज साउदी अरेबियाको सामना गर्दैछ । आजै अर्को समूहमा क्रिस्टिायानो रोनाल्डोको पोर्चुगल र मोरोक्को र स्पेनले इरानको सामना गर्नेछ । पोर्चुगल र स्पेनले पहिलो खेलमा रोमाञ्चक ३–३ को बराबरी खेलेको थियो भने इरानले मोरोक्कोलाई १–० ले हराएको थियो ।
तर आज भने पोर्चुगलमाथि जितको दबाब छ। पहिलो खेलमा बराबरीले एक अंक मात्र जोडेको पोर्चुगल आजको खेलमा मोरक्कोलाई पराजित गरेर स्पष्ट ३ अंक बटुल्न चाहन्छ। उत्कृष्ट फर्ममा रहेका रोनाल्डो यसका लागि सक्षम छन्। पोर्चगुलसँगै समूहमा रहेको इरानले मोरक्कोलाई हराएर ३ अंक पाइसकेकाले आजको हार वा बराबरीले पोर्चुगललाई नकआउट चरण प्रवेशका लागि ठूलै समस्या हुनसक्छ।
तर युवा र युरोपियन फुटबलमा अनुभव प्राप्त खेलाडी रहेको मोरक्कोले पोर्चुगलका लागि सहज हुनेछैन्। किनकी यसअघि इरान विरुद्ध खेल मोरक्को आत्मघाती गोलका कारण १ – ० ले हारेको हो।
२० वर्षपछि विश्वकपमा फर्किएको मोरक्कोले आजको खेल हारेको खण्डमा विश्वकपको समुह चरणबाटै बाहिरिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मोरक्को पनि आज स्पष्ट जीतका लागि मैदानमा उत्रनेछ।
नेदरल्याण्डमा जन्मिएर त्यहीँ व्यवसायिक फुटबल खेल्दै आएका हकिम जियच जस्ता उत्कृष्ट खेलाडी मोरक्कोको टिममा छन्। त्यस्तै टर्कीको फुटबल टिम गालातासरेबाट खेल्दै युनिस बेलन्दा पनि मोरक्कोबाट विश्वकप फुटबल खेल्दैछन्।
मोरक्कोले सन् २०१२ मा जिम्बाबे र सन् २०१५ मा आइभरी कोस्टलाई अफ्रिकन कप अफ नेसन्समा विजयी बनाएका हर्भ इनार्डलाई कोच बनाएको छ। मोरक्कोका सबैभन्दा महत्वपूर्ण खेलाडी भने टर्कीको फेनर्वाचेबाट खेल्ने मिडल्डर नबिल दिरार हुन्।
यद्यपी पहिलो खेलमा उनीहरुबीचमा तालमेलको अभाव देखिएको थियो। जसका कारण मोरक्को इरान विरुद्ध फिनिसिङमा चुकेको थियो। सन् २०१० यता पराजित टोली मध्ये सबैभन्दा धेरै बल पोजेसन कायम राख्ने मुलुकमा मोरक्को सामेल छ। मोरक्कोले इरान विरुद्ध ६८ प्रतिशत समय बल नियन्त्रणमा राखेको थियो।
पोर्चगुल र मोरक्कोबीच एकमात्र भिडन्त सन् १९८६ को विश्वकपमा भएको थियो। जसमा पोर्चुगल मोरक्कोसँग ३ – ० ले पराजित भएको थियो।
तर सन् २०१६ को युरोकप विजेता पोर्चुगल भने यसपटक थप सशक्त देखिएको छ। पोर्चगुलले सन् २००२ यता युरोप बाहिरका मुलुकसँग खेलेको कुनै पनि खेलमा पराजय बेहोरेको छैन।दुबै टोलीबीचको खेल मस्को स्थित लुजनेकी रंगशालामामा नेपाली समय अनुसार पौन ५ बजे सुरु हुनेछ।